Burmese taste - Iora: ထမင်းလွတ်ပုဇွန်ကြော်နဲ့ တိုတိုထွာထွာ ဗက်ဂျီအကင်များ
ထမင်းလွတ်ပုဇွန်ကြော်နဲ့ တိုတိုထွာထွာ ဗက်ဂျီအကင်များ
ပုဇွန်ဟင်းချက်မလို့ လုပ်ရာကနေ စိတ်ကူးပြောင်းပြီး ပုဇွန်ကြော်စားဘို့ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အခွံနဲ့ ကြော်ရင်မွှေးတဲ့အနံ့ ကိုသဘောကျလို့ အခွံ နဲ့ ဘဲကြော်လိုက်ပါတယ်။ တင်ပူရာနဲ့ ကြော်ရင်လည်း အခွံခွာနေရဦးမယ်လေ။ ထုံးစံအတုိုင်း အကောင်လိုက်ကို ခေါင်းအရင်းပိုင်းကနေ ကတ်ကျေးနဲ့ အခွံရော အပေါ်ယံ အသားရောပါအောင် ညှပ်ပြီး အညစ်အကြေးကြောင်းဖယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မျက်စိရဲ့ အောက်နားကနေ ခေါင်းပုိုင်းကို ဖြတ်ပါတယ်။ အဲဒီဖြတ်ထားတဲ့နေရာကနေပြီး ခေါင်းထဲက အညစ်အကြေးကို လည်းဆွဲထုတ်လို့ ရသလောက် ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆားလေးနယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ဆီအိုးတည်ပြီးကျွတ်အောင်ကြော်ပါတယ်။ ထိုင်းဟင်းတွေမှာထဲ့တဲ့ ရှောက်ရွက်ပါထဲ့ကြော်လိုက်ပါတယ်။ မွှေးအောင်လို့ ။ ကြော်တုန်းမှာမွှေးပေမဲ့ စားတော့သိပ်မသိသာပါဘူး။
ကညွတ် နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကင်
ပြီးတော့ စိတ်ကူးတဲ့ရာတွေ လျှောက်ကင်ပါတယ်။ ဘိုတွေစားတတ်တဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကင်။ သူနဲ့ ကျမစားတတ်တဲ့ ကညွတ်ကင်။ မကင်ခင် ကင်မဲ့အိုးကို ဆီလေးနဲနဲဖြန်းလိုက်ပါတယ်။ ထောပတ်ကြိုက်ရင်လည်းသုံးနုိုင်ပါတယ်။ ကျမကတော့အီလို့ ဒီတခါမထဲ့ပါဘူး။ ကညွတ်ကို ဆားလေးဖြူးဟုိုဘက်ဒီဘက်လှန်၊ ကျက်ခါနီးတော့ ခရုဆီလေးထဲ့ ပြီးနှံ့ အောင်လှဲ့ ပေးပါတယ်။ ခဏနဲ့ ဘဲကျက်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကို လည်းနဲနဲခပ်ထူထူလေးလှီး ပြီးကင်ပါတယ်။ ဆားလေးပါးပါးဖြူးပေးပြီး ကင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီကင်၊ ပန်းလိမ္မော်ကင် နဲ့ သခွားသီးကင်
ဂျပန်ဆုိုင်မှာသွားသွားစားရင် ၀ိုင်းအလိုက် chef တွေက ကြော်ပေးတာကို စားမဲ့သူကသူကြော်တာကို ကြည့်ပြီးစောင့်စားရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ မစားခင်မှာ ကုိုယ်စားချင်တာတွေ စာရင်းပေးပြီး chef ကစားမဲ့သူအားလုံးမှာထားတာတွေကို လှည်းလေးနဲ့ သယ်လာပြီးမှ စားမဲ့သူတွေတွေရှေ့ မှာ အစွမ်းတွေပြပြီးကြော်ပါတယ်။ http://www.youtube.com/watch?v=44Nqet4POWU
ဒါက youtube ကယူထားတာပါ။ အဲဒီလိုမျိုးအစွမ်းတွေပြပြီး onion volcano လုပ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်တွေကို ၀ုိုင်းထဲကသူတွေရဲ့ ပန်းကန်တွေထဲကို ကြက်သွန်နီကွင်းတွေ ထဲ့ပေးပါတယ်။ ဒီ ဗီဒီယိုမှာတော့သူကဘေးဖယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကြက်သွန်နီကုို အဲဒီလိုစားရင်တော်တော်ကောင်းပါလားလို့ သိသွားပြီး ကျမရဲ့ မဟောသဓါဥာဏ်လည်းကွန့် မြူးလာပြီး အိမ်မှာ အကင်စားရင် grill လုပ်စားရင် ကြက်သွန်နီ တွေအကွင်းလိုက်ကင်စားလာတတ်ပါတော့တယ်။ သိပ်ချိုပြီးကျွတ်ကျွတ်လေးမုို့ တော်တော်စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ မလုပ်စားဘူးသေးရင် လုပ်စားကြည့်နော်။ ချိုတယ်။
သခွားသီးလည်းချိုပြီးမွှေးပါတယ်။ စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ပန်းလိမ္မော်ကသူငယ်ချင်းပေးထားတာပါ။ အအီပြေအောင်လို့ တွဲစားရအောင် ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ထဲ့ကင်ထားတာပါ။ မှဲ့ တာကပိုစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ စိမ်းတာကတော့ ချဉ်ပါတယ်။
ဆူရှီဆော့စ်လည်း တုို့ စားရအောင် ထဲ့ထားပါတယ်။
ဒါကတော့ကျမ ရဲ့ ပင်တိုင် ချဉ်ငံစပ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ နံနံ၊ သံပုရာ၊ ငံပြာရည်နဲ့ စပ်တားတာပါ။
ပြောင်းဖူးကသူကကြိုက်တတ်လို့ဘူးဖေါက်ပြီးနောက်ဆုံးမှ ဆီလေးပါးပါးထဲ့ ဆားလေးပါးပါး ထဲ့ပြီး ကင်လိုက်တာပါ။
ထုံးစံအတုိုင်း သံပုရာရည်နဲ သောက်ပြီးစားပါတယ်။ ရေနွေးထဲ့ထားတာမေ့ပြီး မသောက်လိုက်မိဘူး။
ဓါတ်ပုံတွေရုိုက်ပြီးတော့ ဗိုက်ကအရမ်းဆာနေကြပြီ။ နှစ်ယောက်သား စကားတောင်မပြောနုိုင်ကြဘူးအားပေးလိုက်ကြတား ပုဇွန်ကြော် သုံးလေးကောင်နဲ့တခြားဟာတွေ တော်တော်စားပြီး မှ စကားပြန်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ နောက်ပုိုင်းကျတော့မှ တီဗီလေး ကြည့်လိုက် အာလူးလေးပေးလိုက်နဲ့အိနြေ္ဒရသွားကြတယ်။
ကဲ....ယောင်းရင်းတုို့ လည်း အားပေးသွားပါဦးနော်။
Posted by Iora at 3:36 AM
Labels: Shrimp, Veggie
Mon Petit Avatar April 24, 2011 at 3:47 AM
Both shrimps and all the vege are my favorite barbecue dish,and it all seems very yummy!
yar zar April 24, 2011 at 3:56 AM
အစ်မရေ စားချင်စရာတွေ ကြည့်ပါလား..
Addy Chen April 24, 2011 at 4:21 AM
မမရေ ရှင့်ဟာတွေက တူးကုန်ပြီနော်
ဝေါ့ ဗာရီဖီကေးရှင်း ကို ကွန်မန့် ဆက်တင်ထဲမှာ သွားဖြူတ်လိုက်ပါ မန့်ရတာ ရှုပ်တယ်
Baby taster April 24, 2011 at 4:54 AM
ခရမ်းချဉ်က လွဲရင် အကုန်စား၏
Anonymous April 24, 2011 at 9:31 AM
Yeah, both are delicious only citrus are left. :)
ခရုဆီရောင်ကြောင့်တူးတယ်လို့ တင်ရတာပါ။ နဲနဲတော့အတူးခံထားပါတယ်။ မွှေးအောင်လို့ ။ဒါပေမဲ့တမင်လုပ်တားတာပါ။း)
ခရမ်းချဉ်သူလည်းမစားဘူးး)အကုန်ကြိုက်ရင်အကုန်အားပေးသွားး)
အဲဒီချဉ်ငံစပ်လည်း တို့ပင်တိုင်ပဲ။ အဲလိုစပ်တာမျိုး အရမ်းကြိုက်တယ်
Iora April 24, 2011 at 2:04 PM
အကြိုက်တွေတူကြတယ်နော်။။ အတူတူသာနေကြရင် တော်တော်လုပ်စားဖြစ်ကြမယ်ထင်တယ်။ နော်။ ချဉ်စပ်လုပ်ရင်များများလုပ်ထားပြီးနောက်နေ့ တွေပါဆက်စားတယ်။း)
မြစ်ကျိုးအင်း April 25, 2011 at 9:29 AM
စားစရာပုံတင်တာတော့ တင်တာပေါ့.. ဒါပေမယ့် ပုံတွေက တအားကြီးပြီး ရှင်းလွန်းတော့ ပိုဗိုက်ဆာမိတယ်ဗျး)
Iora April 25, 2011 at 6:32 PM
နောက်တယ်နော်။ အီစကုို ကဖွင့်မရလို့ စိတ်ပျက်သွားတာလားလို့ ။း) တော်သေးတာပေါ့။
စားပွဲနဲ့ တုိုးတာကံကောင်းလို့ ပေါ့။ မုန့် ဟင်းခါးစားနဲ့ တိုးတာထက်စာရင်။ အင်း..သူငယ်ချင်းအသစ်စက်စက်ဆုိုရင်တော့ မုန့် ဟင်းခါးကျွေးလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး။း)
Iora April 25, 2011 at 7:01 PM
နံမည်ရေးဘို့ မေ့သွားလို့ ။ အပေါ်မှာ ပြန်ရေးထားတယ်နော်။